महाशक्ति देशहरूबीच तनाव बढ्दै जाँदा युद्धको खतरा
केही दशक लगाएर समृद्धितिर ध्यान केन्द्रीत गर्ने चीनले त्यस अवधिमा संसारको राजनीतिक उथल पुथलमा खासै चासो नराख्नु उसले पाएको उपलब्धिको धेरै ठूलो सुनौलो पक्ष हो । केही दशकको अविराम परिश्रमले चीन विश्वस्तरको दोश्रो समृद्ध राष्ट्रको रूपमा मात्र विकसित भएन, ठूलो इकोनोमिको इज्जतदार भूमिका पनि प्राप्त ग¥यो । ९० को दशकदेखि विश्वमा कम्युन..
पहिलो संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको तत्कालीन नेकपा माओवादी गुटबन्दीको शिका..
बाबुरामले जनताको सम्मान गर्लान् ?
विकासका संवाहक नेता । नेपाली विकासप्रेमी जनताको आस्थाका धरोहर । शोषित, पीडित, गरिब, दुःखीक..
बाफ रे, काठमाडौंमाथि कति धेरै विश्वास
धेरैको साझा सपना हुन्छ एसएलसीपछि काठमाडौंमा पढ्ने । घरनजिकै कलेज हुँदा पनि काठमाडौंका कलेज..
प्रिय त्रिशूली, केका आधारमा तिमीलाई बलि दिइरहनुपर्ने ?
कुनै समय नेपालमा दैनिकजसो लडाइँ हुन्थे । दैनिकजसो मानिस मर्थे । समाचारका ठुल्ठूला हेडलाइन ..
युवाहरूको कस्मेटिक अभियान !
बानेश्वरमा एक हुल युवा अभियन्ता बढ्दो लैङ्गिक हिंसा कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न जुटेका छन् । लामो गहन छलफलपछि बैठक माइतीघरदेखि शान्ति वाटिकासम्म र्याली गर्ने र सहभागी सबैका लागि टिसर्ट बनाउने निणर्य हुन्छ । उल्लेख्य सहभागिता सहित कार्यक्रम हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रचार गरिएको उक्त कायक्रमको समीक्षा बैठक ब..
निगम कर्मचारीबाटै जहाजको पाङ्ग्रा चोरिएपछि
सुरक्षित तथा भरपर्दो हवाई सेवा उपलब्ध दिने उद्देश्यसाथ सन् १९५८ जुलाई १ बाट आफ्नो यात्रा तय गरेको पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको हवाई सेवाप्रदायक नेपाल वायुसेवा निगमले आधा शताब्दी पार गरिसकेको छ । आधा शताब्दी भनेको युग परिवर्तनका लागि काफी हुन्छ । तर, देशको पहिलो हवाई सेवाप्रदायक संस्थाले तय गरेको आफ्नो आधा शताब्दीको महत्वपूर्ण ..
चुनौतीमा मोफसलको पत्रकारिता
राज्यको ‘वाचडग’ वा राज्यको चौथो अंगको स्वतःस्फूर्त उपाधि पाएको पत्रकारिता आज विभिन्न चुनौतीको घेरामा सल्बलाइरहेको छ । पत्रकारिता पनि राष्ट्रिय तथा मोफसल गरी दुई धारमा विभाजित भएको पाइन्छ । विशेषगरी मोफसलको पत्रकारितामा देखापरेका समस्या उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ । मोफसलमा मुख्यतः मालिक, कामदार र सौखिन गरी तीन किसिमका पत्रकार भेट..
धन कमाउने काइदा नेपालमै
संसारमा समय, परिश्रम र शिक्षाभन्दा ठूलो अरु केही छैन । तर पनि पछिल्लो समय नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै पुँजीवादले वर्चश्व जमाउँदै आएको छ । पुँजीवादले गाँज्नु भनेको व्यक्ति, समाज, देश र विश्वलाई नै नकारात्मक कुरा हो । पुँजी अर्थात् धनवादले नै मान्छेलाई निर्दयी, निष्ठुरी र स्वार्थी पनि बनाउँछ । किनभने पुँजी लगानी गरेर पुँजीपतिले गर..
व्यक्तिविशेषको नाराले थेगेको देश
आईएम विथ केपी ओली, आईएम विथ प्रचण्ड, आईएम विथ डा. केसी । हिजोआज यस्तै नारा हिट भइरहेछन् । न कुनै पद्धतिको विरोधमा नारा निस्कन्छ न कुनै व्यवस्था, निकाय वा निर्णयको खिलाफमै । बस व्यक्तिपुजक मन्डलीको भजन यत्रतत्र गुञ्जयमान भइरहन्छ । २०६२÷०६३ तिर देशको आमूल परिवर्तनका खातिर गणतन्त्र जिन्दावाद भन्दै दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नारा ल..
सीमांकनमा भूल भए डरलाग्दो अवस्था निम्तिने
मधेसवादी दलको मुख्य अडान सीमांकन प्रस्ट छ । सीमांकन यस्तो संवेदनशील मुद्दा हो, जो तत्कालै नरम–गरम रुपमा सम्बोधन गरिएको भए पनि अथवा सच्च्याइएको भए राम्रो हुने थियो । तर, अहिलेको अवस्थामा सीमांकन मुद्दा ४४० भोल्टको करेन्ट बनिसकेको छ । प्रचण्ड हुन् वा देउवाले जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि यस मुद्दालाई छुनसाथ आउने दुष्परिणामका कारण पन्छ..
सीतामाथि आक्रमण कि राष्ट्रियतामाथि आक्रमण ?
तुलनात्मक रुपमा हार्दिक रहेको नेपाल–भारत सम्बन्धमा त्यतिबेला दरार देखियो । जतिबेला दलहरु आफ्नो स्वत्वसहित संविधान निर्माणमा केन्द्रित भए । २०७२ जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमतिमा आफ्नो अस्तित्वको गुन्जायस नभएपछि दिल्ली गर्मीको पारो ह्वात्तै बढ्यो । संविधान रोक्न दिल्लीले कूटनीतिक मर्यादा नाघेर सम्भव–असम्भव सबै प्रयत्न गर्यो । अन्त..
किन सुन्दैनन् हाम्रा नेताहरु देशभक्ति कुरा ?
भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता पक्षधर पार्टीहरूलाई भ्रमणको ब्रिफिङ गर्दा भारतीय समकक्षीसामु आफूले नेपालको स्वार्थअनुकूलको मुद्दामा जोडदार भनाइ राखेको दाबी गरेका थिए । उनले विगतमा सन् १९५०को सन्धिलगायतको विषयमा पुनरावलोकन गर्नेसम्मको माग राखेको दाबी गरेका थिए । आफ्नो पक्षबाट नेपाललाई घाटा ..
लैंगिक विभेद विकास बाधक
समाज विकासको पूर्वकाल खण्डमा मातृसत्तात्मक समाज थियो । समाज विकासको दौरानमा महिलाको भूमिका पारिवारिक रूपमै कमजोर हुँदै गएपछि सम्भवतः पितृसत्तात्मक समाजको विकास भएको हुन सक्छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विकसित मुलुकमा लैंगिक असमानताको खाडल केही हदसम्म पुरिँदै गए पनि पूर्ण रूपमा समान बन्न सकेको पाइँदैन । सामाजिक विश्लेषकको भनाइमा प्र..
राजनीतिक हलचल र संविधानको वार्षिकी
नेपाल १०४ वर्षे राणा शासनविरुद्ध भएका विभिन्न चरणाका आन्दोलन भए । त्यो सफलतापछि पनि विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन र सङ्घर्ष भए । कहिले पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै जननिर्वाचित संसदीय व्यवस्था पनि केही समय कायम रह्यो । जननिर्वाचित संसदबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था कायम हुँदै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्..
संविधान दिवससँगै नेपाली जनताका अपेक्षा
राज्यले पहिलो गणतान्त्रिक संविधान दिवस भव्य रूपमा मनाएका छन् । नेपाली जनताको सात दशक लामो प्रयास सफल भएको खुशी मनाउँदै गर्दा जनता विभक्त देखिन्छन् । एकाथरी संविधान दिवसलाई भव्यताका रुपमा मनाइ रहेका छन् भने अर्काथरी कालो दिनका रूपमा विरोध गरिरहेका छन् । दूरदराजका गाउँबस्तीमा सामन्य रोजीरोटीका लागि दिनरात नभनी परिश्रम गर्ने मजदुरल..
लोक संगीतलाई जोगाई राख्न छैठौ माहाधिबेशन सफल हुनुपर्छ
हिन्दू नेपालीहरुको महान् पर्व विजयादशमी आउन केही दिन मात्र बाँकी छ । कसैलाई दशैं कसरी मनाउने चिन्ता होला त कसैलाई उत्साह पनि । यसैसँगै असोज ८, ९ र १० आउन पनि धेरै दिन बाँकी छैन । नेपालका प्रसिद्ध शहरहरुमा यि दिनहरुको चियो चर्चा निकै हुने गरेको छ । नेपाली लोक कलाकारहरुको महान् पर्व हुनेमा कुनै […]
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको सेरोफेरोमा केही साता यता नेपाल—भारत सम्बन्धबारे बहस चलिरहेको छ । हिजो मात्र प्रम दाहाल भारत भ्रमणमा निस्किएका छन् । बहसमा प्रम दाहाल र उनको यस भ्रमणलाई लिएर निकै टीकाटिप्पणी सुरु भइसकेको छ । सत्ता पक्षले भ्रमणपछि दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने दाबी गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्ष र सान..
स्वर्गवासी राजासँग नतर्सौं
केही हप्ता अगाडि नेपालगञ्जको वीरेन्द्र चोकमा केही स्थानीयहरुबाट स्वर्गीय वीरेन्द्रको सालिक राख्ने प्रयास गरेपछि तनाव उत्पन्न भयो । तनावका बीच पनि त्यहाँ सालिक त राखियो तर रातारात त्यो प्रहरीद्वारा हटाइयो । यसको मुख्य कारण प्रचलित ऐन कानुनविपरीत भएर होइन । हाम्रो गणतान्त्रिक सरकारको राजतन्त्रप्रतिको डर वा कमजोर आत्मविश्वासको उपज ..
कर्णाली सम्पन्नता बारे गम्भीर बनौं
एउटा दैनिक पत्रिकामा कर्णालीका बुद्धिजीवी मीनबहादुर शाहीको गहन विचार पढ्न पाएँ । धेरैपछि शाहीकोे गुनासोमूलक आलेख पढ्न पाउँदा एक हदसम्म खुशी महसुस भयो । खुशी यो अर्थमा हाम्रो कर्णालीका बुद्धिजीवी हौं भन्नेहरुका लेखरचना प्रायः पढ्न पाइँदैनन् तर चर्चित दैनिक पत्रिकामा शाहीको लेख पढ्न पाइयो । कर्णालीका सरोकारवाला व्यक्तिहरुले कर्णाल..
प्रचण्डको अग्निपरीक्षा ?
प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्ड दोस्रो पटक भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । प्रथम पटकको भ्रमणमा त्यति महत्व नदिए तापनि दोस्रो पटकको भ्रमणमा जोडदार स्वागत गर्ने तयारमा छ भारत । हुन त छिमेकी राष्ट्रको भ्रमण हुनु निश्चित रुपमा अति राम्रो कुरा हो तर जुन प्रकारले नेपालमा केही महिना केही वर्षको अन्तरालमा प्रधानमन्त्रीहरु परिवर्तन हुने परम्परा ब..
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई खुलापत्र
नेपालको विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास गर्न २०६७ असारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र वन विज्ञान अध्ययन संस्थान (आईओएफ) हेटौँडालाई विश्वविद्यालयका रुपमा रुपान्तरण गर्दै कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (एएफयू) को स्थापना भयो । स्थापनासँगै कृषि शिक्षाको प्रभा..
को होलिन् ती आमा ?
काठमाडौंको चाबहिलमा रहेको पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह पहिलो वर्षमा अध्ययनरत थिएँ । बिहान ६ बजेदेखि कक्षा सुरू हुन्थ्यो । पहिलो घन्टी अनिवार्य नेपालीको पढाइ हुन्थ्यो । पढाइ चलिरहेको अवस्थामा एक विद्यार्थी नेताले सर एउटा सूचना सुनाउनु छ भन्दै समय मागे । सूचनामा भनिएको थियो, ‘सरकारले पेट्रोलको मूल्य बढाएकाले चलिरहेको कक्षा ..
राजनीतिमा युवा नेतृत्वका तगारा
अर्थशास्त्रमा सक्रिय जनशक्तिको पर्यायवाची युवा समुदाय भएजस्तै राजनीतिमा संघर्ष, बलिदान, त्याग, समर्पण र आन्दोलनको पर्यायवाचीका रूपमा युवालाई लिन सकिन्छ । विश्व र हाम्रो मुलुकका परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन र इतिहासले समेत यस विषयलाई पुष्टि गर्दै आएको छ । यद्यपि, हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलन र संघर्षका अग्रमोर्चामा नेतृत्व गर्दै आए..
संस्मरण : महिना दिनको यात्रा
भारतबाट नेपाल फक्र्यौं । पैदल हिँड्ने बानी थिएन । दाङबाट हिँडेरै रोल्पा पुग्नु थियो । दुस्मनको गतिविधि बुझ्दै अगाडि बढ्यौं । जनताको न्यानो साथ र समर्थनमा सञ्चालित जनयुद्धमा होमिएका थियौं । विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सेल्टरका साथीले एकबाट अर्को पोस्टसम्म पुर्याउँथे । यो क्रम दाङदेखि रोल्पाको थवाङसम्म जारी रह्यो । रोल्पास्थित हान्निङ..
फ्री भिसा फ्री टिकटका नाममा ठगी
हिजो गाउँबाट एकजना दाइले फोन गरेर अबुधबी ट्याक्सी ड्राइभरको भिसा पाउने भएको छु, आउँदा कस्तो हुन्छ ? भनेर सोध्नुभयो । कतारको लामो अनुभव भएका र कतारको सवारी चालक अनुमतिपत्र भएका उनले ४ लाख नेपाली रुपयाँ उजेन्टलाई दिनुपर्ने रहेछ । उनले भने– अरु विकल्पभन्दा यही लाग्यो । कमाइ पनि राम्रो हुन्छ भनेका छन् । उनलाई मैले […]
षडानन्दको अवमूल्यान कहिलेसम्म ?
षडानन्द अधिकारीको प्रसिद्ध नाम हो बालागुरु षडानन्द । उनको बारेमा नसुन्ने र नजान्ने नेपाली समाजमा विरलै मानिसहरु होलान् । गाउँदेखि सहर र सहरदेखि सदनसम्म उनका बारेमा राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिहरुको जमात छ । तर उनले नेपाल र नेपालीमाझ दिएको शिक्षा र समाजमा पुर्याएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्ने कही कसैबाट हुन सकेको छैन् । सायद आज उनै [..